Ị nọ ebe a: Home / Ndozi Nlekọta / Oge ochie na-echebe nri - The Desert Refrigerator
1 Ọnọdụ - Owuwe Ihe Ubi Taa Na-ere Ahịa Taa
2 Nsogbu - Na - echekwa akwụkwọ nri ole na ole na - enweghị ike
Ọnọdụ - Owuwe Ihe Ubi Taa Na-ere Ahịa Taa
Enweghị ike eletrik na ọtụtụ n'ime ime obodo ime obodo, n'ihi na enweghị ọkụ eletrik enweghị ike ịkụzi.
Ọbụna na obodo ukwu na obodo obodo ike na-ezighị ezi.
Ọtụtụ n'ime ndị ogbenye bi n'obodo ukwu apụghị ọbụna inye ndị na-edozi nri.
Ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ ugbo, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ha bi ogbenye ọnụ ntụ.
Di na nwunye bụ akụkụ bụ isi nke usoro ezinụlọ, na ndị inyom, ndị bi na purdah, na-abanye n'ụlọ ha.
Ụmụ nwanyị anaghị enwe nsogbu maka nlekọta ahụike, agụmakwụkwọ na ohere ọrụ.
Ụmụ agbọghọ na-amanye ohu karịsịa n'ihi na a manyere ha ịpụ kwa ụbọchị iji ree nri ngwa ngwa nke ga-ala n'iyi ọzọ, iji gbakwunye obere ego ezinụlọ.
Nsogbu - Na - echekwa akwụkwọ nri ole na ole na - enweghị ike
Chọta usoro aghụghọ nke ga-achọ ka esiteghị n'èzí
na-echekwa mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri na ihe ndị ọzọ na-emebi emebi na mbara igwe.
usoro ikuku mmiri na-esi na tebụl, ụdị "ebe nchekwa refrigerator", na-enyere ndị ọrụ ugbo aka nchekwa site na ibelata ihe oriri na ihe mkpofu
ọ na-eme ka ha nweta ego
ọ na-egbochi ihe ize ndụ ahụike nke nri ndị na-emebi emebi
Okpokoro ite ahụ nwere ite abụọ nke ụrọ nke di iche iche dị iche iche, nke e debere n'ime nke ọzọ. Ugbua n'agbata ite abụọ ahụ jupụtara na ájá ájá nke a na-edebe mgbe niile, ọ ga-eme ka akụ abụọ ahụ ghara ịdị. A na-etinye mkpụrụ, akwụkwọ nri na ihe ndị ọzọ dịka ihe ọṅụṅụ dị nro n'ime ite dị n'ime ala, nke kpuchiri ya na ákwà akwa.
Ọkpụkpọ na ite nyocha
Ihe mbụ abba nke ite nke ite-ite na-aga nke ọma:
Dị ka ihe atụ, eggplants na-adị ọhụrụ maka ụbọchị 27 karịa 3
tomato na akwụkwọ edere maka izu 3 ma ọ bụ karịa
afia ahihia african na-abụkarị ihe nkwata mgbe otu ụbọchị, nọgidere na-eri nri mgbe ụbọchị 12 gasị na ite
Ọkụ na Ntụle Ihe
Ihe mbụ - Onyinye Enyemaka Rolex
Ozi ndị ọzọ - Wikipedia
Nkọwa nkọwa ndị ọzọ - Utu ite mmiri